မြေပုံများ, ပို့ဆောင်ရေး, GPS, | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Topic: မြေပုံများ, ပို့ဆောင်ရေး, GPS,
အဘယ်အရာကိုနိုင်ငံတွင်းရှိနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်တောင်ပေါ်မှာကွန်မြူနစ် Peak ပါသလဲ ၎င်း၏အမြင့်ကဘာလဲ?
ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၏အထွတ်အထိပ်သည်မည်သည့်နိုင်ငံနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်တည်ရှိသနည်း။ ၎င်း၏အမြင့်ကဘာလဲ ထိုအမည်မှာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်အထိဖြစ်ပြီး၊ ယခုတောင်ကို Ismail Samani အထွတ်အထိပ်ဟုခေါ်တွင်သည်။
မော်စကို Ring ကို၏သုညကီလိုမီတာစိတ်အားထက်သန်၏အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်အဲဒါကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဘာရှိခဲ့သလဲ
မော်စကိုလက်စွပ်၏ကီလိုမီတာသုညသည် Entuziastov အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်အတိအကျအဲဒီမှာဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသနည်း ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း (စစ်မတိုင်မီနှင့်စစ်ပြီးချိန်များကိုမမှတ်မိခြင်း) သည် ၁၉၆၆ ခုနှစ်အကုန် Yaroslavl အနီးတွင်စတင်ခဲ့သည်။
ယူကရိန်းတွင်စတုရန်းနောက်ကွယ်မှအကြီးဆုံးareaရိယာကဘာလဲ။ Voooooooooo SPS Odessa ဒေသ ၃၃၁၀ ကီလိုမီတာ # ၁၇၈၊ ယူကရိန်း၏အကြီးဆုံးဒေသနှင့်အုပ်ချုပ်ရေး - နယ်မြေယူနစ်။ Aရိယာထဲမှာအကြီးမားဆုံး ...
မော်စကို: st.Novogireevo ကနေ Mega Belaya Dacha ဖို့ဘတ်စ်ကားဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာရဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
MOSCOW - Novogireevo ဘူတာမှ MIBA Belaya Dacha သို့ဘတ်စ်ကားများ၊ အဲဒီကိုဘယ်လိုသွားရမလည်း trolleybus 64 ကို Vykhino platform သို့သွားပါ။ Kuzminki မက်ထရိုဘူတာကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ 955 Kuzminki မက်ထရိုဘူတာမှ ...
Coupe တစ်ခုနှင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောထိုင်ခုံအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။ အဲဒီမှာသင်ကအခန်းထဲမှာပဲပိတ်ထားပြီးအခန်းထဲရှိလူလေးယောက်နှင့်ဆန့်ကျင်ဖက်မှာထိုင်နေတဲ့ထိုင်ခုံမှာအကုန်လုံးပွင့်နေတယ်။ နည်းလမ်းများစွာနဲ့ကွဲပြားနေသည်။ ငါတို့နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံး ...
အောက်ဖော်ပြပါတောင်များမှာကူလွန်း၊ အက်တလပ်၊ ဒရက်ကစ်ဘာ့ဂ်၊ Great Split Ridge, ချန်တောင်များ
အောက်ပါတောင်တန်းများတည်ရှိရာနေရာများမှာ Kun-Lun၊ Atlas, Drakensberg Mountains, Great Water Ridge, Appalachian Mountains, မြောက်အမေရိကအရှေ့ပိုင်း၊ USA နှင့် Canada တွင်ရှိသောတောင်တန်းစနစ်ဖြစ်သည်။ အရှည်…
နယူးယောက်မြို့ရှိနယူးယောက်မြို့ရှိနယူးယောက်မြို့၊ နယူးဇီလန်သည်နယူးယောက်မြို့ရှိလူ ဦး ရေ ၆၀၀,၀၀၀ ခန့်သည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ဒေသတွင်နေထိုင်ရန်အလွန်ကြီးမားသည်။ သူကသူ့inရိယာ၌တည်ရှိ၏။ နယူးယောက်မြို့သည်ဥရောပ၏အရှေ့တောင်ဘက်ရှိမြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကိုဧရိယာရှိ Matrika သြစတြေးလျ
Australiaစတြေးလျနှင့်သမုဒ္ဒရာ၏matrixရိယာသည် ၈၁၁၁၀၀၀ စတုရန်းမီတာဖြစ်သည်။ km သြစတြေးလျပြည်မ၏Theရိယာမှာ ၇,၆၈၇၀၀၀ စတုရန်းပေဖြစ်သည်။ km သြစတြေးလျကမ်းရိုးတန်းအလျား ...
Kotelniki ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။ Lyublino မှ Kotelniki ဘတ်စ်ကားဂိတ်သို့ဘယ်လိုသွားရမလဲ။ လမ်းကြောင်းအငှား ၄၇ - MEGA - Lyubertsy - Nekrasovka - Zheleznodorozhny 47 - ...
တရုတ်နှင့်ဂျပန်နိုင်ငံမှ Vladivostok ကနေအကွာအဝေးဆိုတာဘာလဲ!?
Vladivostok ကနေတရုတ်၊ ဂျပန်အထိအကွာအဝေးကဘာလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၉၀၀၀ ကီလိုဂရမ်ကိုမော်စကိုကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်။ Primorsky Krai သည်ရုရှားအရှေ့တောင်ဘက်အစွန်ရှိဂျပန်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတွင်တည်ရှိသည်။ နယ်မြေအတွင်း…
အဘယ်မှာရှိ Yaroslavl ၏မြို့ဖြစ်သနည်း ဝေးမော်စကိုကနေ?
Yaroslavl မြို့ဘယ်မှာလဲ? မော်စကိုနဲ့ဝေးလား မော်စကိုမြို့၏အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ Yaroslavl .. ကီလိုမီတာ ၂၂၀ အကွာတွင်ရှိသည်။ Yandex ကပြောကြားသည်။ ဖြောင့်တန်းတန်းတန်းဖြင့် Yandex ကိုချိတ်ဆက်ထားသည်။ http://beta-maps.yandex.ru/?rt=220, ငါ၏အမတိုင်မီ 37.516063,55.71401439.823197,57.583691ll = 38.92781,56.832531spn = 8.76709,2.674373
နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အမေရိကတိုက်တွင် Kansas City ၏ပြည်နယ်?
နှင့်အဘယ်အမေရိက၏ပြည်နယ် Kansas ပြည်နယ်၏မြို့ဖြစ်သနည်း Kansas City သည်အမေရိကန်မြေပုံရှိအရာဝတ္ထုများစွာနှင့်ကိုက်ညီသည်။ Kansas City သည် Kansas ပြည်နယ်၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။ Kansas City သည် Missouri ရှိမြို့တစ်ခုဖြစ်သည်။ Kansas City သည် Kansas ပြည်နယ်၏နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။
အတွင်း / နာရီဟာဎ။ Kalininets ရောက်ရှိဖို့အဖြစ် prompt ကို 31134
မော်စကိုသို့ ၃၁၁၄၄ ကယ်လင်နင်အခြေချ၊ မည်သို့သွားရကြောင်းပြောပြပါ။ Belorussky မီးရထားဘူတာမှရထားဖြင့်သို့မဟုတ် metro / platform များမှ Fili, Begovaya, Kuntsevo (သင် metro မှ ၁၀ မှ ၁၅ မိနစ်လမ်းလျှောက်လျှင်) Golitsyno သို့ရထားဖြင့် ...
စိန့်ပီတာစဘတ်ကနေ Kingisepa ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? မဆိုရွေးချယ်စရာကြောင့်အလွန်လိုအပ်
စိန့်ပီတာစဘတ်ကနေ Kingisep ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။ ရွေးချယ်စရာများ၊ အလွန်လိုအပ်သည်။ Obvodny 36 ရှိဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှဘတ်စ်ကားဖြစ်သည်။ Kingisepp ကိုယ်တိုင်၊ Slantsevsky, Ivangorodsky, Gdovsky, 944th Pskov (972nd not) သည်လည်းသင့်လျော်သည်။
အဆိုပါ Central Siberian ကုန်းပြင်မြင့်၏ဖော်ပြချက်
ဗဟိုဆိုက်ဘေးရီးယားကုန်းပြင်မြင့်၏ဖော်ပြချက်ဗဟိုဆိုက်ဘေးရီးယားကုန်းပြင်မြင့်၏ကျယ်ပြန့်သောကုန်းပြင်မြင့်များနှင့်ကုန်းမြင့်များဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ နယ်မြေအကျယ်အ ၀ န်း၏အမြင့်ဆုံးနေရာများမှာပူတာရာနာ၏အလယ်တန်းတောင်တန်းများ (ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၁၇၀၁ မီတာ) ရှိသည့်မီးတောင်များနှင့် ...
ရုရှားရှိရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ကွက်များရုရှားရှိသဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ကွက်များစာရင်း - Urengoy Yamburg Bovanenkovskoe Shokokmanovskoe Leningradskoe Rusanovskoe Zapolyarnoe Medvezhye Astrakhan အနောက်အနောက် Kamchatka ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း Sakhalin-3 Orenburg ဓာတ်ငွေ့ငွေ့ရည်ဖွဲ့စက်ရုံ Igrimskoe Ledovoe
prompt ကို။ အဘယ်မှာရှိမော်စကို 3.gde အတွက် 25-ကြိမ်မြောက်လမ်းပေါ်အိမ်သူအိမ်သားလက်သမားအားလုံးအကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်အမြီးအမောက်ရိုက်ကူးသလဲ?
ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ။ မော်စကိုတွင်တည်ဆောက်သူများ၏တတိယမြောက်လမ်း၊ အိမ် ၂၅ ။ လူတိုင်းကံကြမ္မာ၏ကံကြမ္မာကိုရိုက်ကူးထားသည့်နေရာဖြစ်သည်။ လိပ်စာကအယောင်ဆောင်ပြီးအိမ်ကတကယ်ပဲ။ ယူဂို - စပါဒနာယာ Vernadsky ရိပ်သာလမ်းမှာ၊ ဒီနံပါတ်ကိုကျွန်တော်မမှတ်မိဘူး။ တစ်ရာ ...
သင်ကဘတ်စ်ကားအချိန်ဇယားလိုအပ်ပါတယ်နှင့် Samara ထံမှ Chapayevsk Podskazhite.Spasibo သူတို့ကိုရေတွက် !!!!
ကျွန်ုပ်တို့သည် Samara မှ Chapaevsk သို့ဘတ်စ်ကားအချိန်ဇယားလိုအပ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ 140. Chapaevsk ရှိဆင်ခြေဖုံးဘတ်စ်ကားစီးမှုနေ့စဉ် ၆ ရက်မှ ၂၂ နာရီလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု။ အချိန်ဇယားချာပါ့စ်မှပထမဆုံးဘတ်စ်ကားထွက်ခွာချိန် - ၆း၀၀ နာရီ ...
မော်စကိုကနေ Maykop ရောက်ရန်မည်သို့ ??? အလွန်အရေးတကြီးလိုအပ်ငါ့ကိုပြောပြပါကျေးဇူးပြုပြီး !!!!
မော်စကိုမှ Maykop ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ ??? အရမ်းအရေးတကြီးလိုအပ်နေပါ။ ရထားဖြင့်လမ်းတွင် ၂၀-၂၆ နာရီအစာရှောင်ခြင်းဖြင့်ရထားဖြင့်သွားပါ။ လမ်း ၃၂ နာရီ။ Platz လက်မှတ်။ 20 r မကြာမီ 26 ...
Voronezh မှ Kazan သို့မည်မျှကီလိုမီတာ Voronezh - Kazan လမ်းမကြီး အကွာအဝေးနှင့်လမ်းကြောင်းအကွာအဝေး Voronezh - Kazan ကားလမ်း - 1040 km ။ Voronezh မြို့မှမောင်း ...
56 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 1,164 စက္ကန့်ကျော် Generate ။